Midowga Afrika oo sheegay in uu ka xun yahay diidmadii Soomaaliya ee Ergayga – Banaadir Times
By banaadir 23rd May 2021 37 No comment
Midowga Afrika ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay go’aanka Soomaaliya ay ku diiday magacaabistii madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama oo ahaa wakiilka sare ee Soomaaliya.
Horaantii bishaan, Soomaaliya ayaa diiday magacaabista Mahama iyadoo ku doodeysa in madaxweynihii hore ee dalka Ghana uu xiriir ballaaran la leeyahay Kenya, oo Soomaaliya ay kala dhaxeyso khilaaf siyaasadeed.
Sida laga soo xigtay Wasiirka Arimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq, Mahama wuxuu xiriir dhow la lahaa shaqsi aan la magacaabin oo ka tirsan hoggaanka Kenya sidaa darteedna aan loogu tashan doonin inuu noqdo dhex-dhexaad.
Soomaaliya ayaa warqad u qortay Gudoomiyaha Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat oo ay ku wargalisay in ay taageero u haynin shaqada cusub ee Mahama.
“Waxaan muujineynaa sida ay uga xun tahay go’aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya, iyadoo diiday magacaabista H.E. Mr John Dramani Mahama, isagoo ah Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaan ku boorrinaynaa Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika inuu sii wado wadahadalka uu la leeyahay DFS si loo xalliyo khilaafka jira isla markaana uu warbixin uga siiyo Golaha sida loogu dhaqaaqayo la macaamilka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Golaha Amniga (PSC) ayaa lagu yiri bayaanka.